Ogaden News Agency (ONA) – Soo Jeedin mudan Tixgalin – Noora Afgaab
Soo Jeedin mudan Tixgalin – Noora Afgaab
Somalidu waxay ku maahmaahaan – Lax walba shililkay is-dhigtaa lagu qalaa – waxaana loogu maahmaahaa marka la arko qof meel aan u qalmin lagu bahdalo markuu isaga is-qiimi rido. Waxaa maanta heerkaa jooga dadka ku nool magaalooyinka iyo tuulooyinka ee kolba wiilal yaryar uu Cabdi iley u soo dirayo inay soo qabqabtaan oo qoorta u dhiibanaya, ka dibna siday u qaraacayaan qaarkood sidaa ku godgala. Maxay tahay sababta uu qoorta u dhiiban qof ogsoon inuu kuwaa gacantooda ku dhimanayo ama haduu ka soo nabad noqdo xataa aan caafimaadqab iyo laxaad wanaag toona la soo noqon doonin?
Odayaal dhowr ah ayaa guri isugu yimid habeen dhaweyd say u falanqeeyaan xaaladdan cusub ee dalka ku soo korodhay iyo dhibaatada ay ku hayaan ciidamada gumaysiga iyo adeegayaashiisa umadda Somaliyeed guud ahaan gaar ahaan kuwa sida tooska ah ugu jira gumaysiga Itobiya. Ugu horeyn waxay isla qireen qofka kali ah ee maanta sheegan kara inuu xoryahay waa wiilka qoriga haysta ee la dagaalamaya gumaysiga ee diiday heeryadiisa. Wiilkaasi haduu noolyahayna waa shaqsi xor ah oo cabsi la’aan nool, oo garanaya wuxuu lakulmi doono markuu soo tooso, hadday tahay weerar uu ku soo qaado cadawga umadiisa iyo hadday tahay difaac uu naftiisa iyo umadiisa ka difaacayo cadawga umadiisa. Haduu dhintana wuu garanayaa wuxuu Ilahay la hortagi.
Dadka intiisa kale ee soo hadhay, gaar ahaan kuwa ku nool magaalooyinka ee dil ama xabsi sugayaasha ah, haduu noolyahayna wuxuu ku noolyahay cabsi iyo berri tolow maxaad la kulmi ama walaalkaa la kulmi ama wiilkaaga/gabadhaada/xaaskaaga ay la kulmi. Haduu dhinto ama la dilana ma garanayo waxa Ilaahay hortii uga horeeya sababtoo ah markuu ugu fiicnaado wuxuu ku dacwooni inuu ahaa –Mustadcaf- aana awood lahayn uu kaga cararo ama isaga celiyo. Jawaabta uu helayana quraanka ayay ku qurantahay.
إنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلآئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالْوَاْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُوْلَـئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءتْ مَصِيرً
Cudurdaana kuma helayo sidaa.
Odayaashii goobtaa isugu yimid markay arimihii rogrogeen iyagoo aad ula yaaban waxa dadka ku dhacay, ayay is-weydiiyeen talooyinka ay dadweynaha u soo jeedin karaa, maadaama aanay odhanaynin magaalooyinka iyo tuulooyinka ka qaxa oo isaga guura oo dalka baneeya tasoo ah qorshaha dhabta ahee Itobiya ay wadato oo Cabdi iley lagu fushanayo. Waxay odayaasha isla meel dhigeen qodobo dhowr ah oo si sahal ah loo fulin karo isla markaana wax weyn ka badali doona sida shacabka ula dhaqmi doonaan budhcadda gumaysiga Itobiya ku soo hubeeyay shacabka ee Liyu-Boolis uu ula baxay. Talaabada ugu horeysana waa in qofkasta oo ka mdi ah Liyuu-booliska dambiga uu gacantiisa ku fuliyo lagula xaalo loona qabsado isaga oon la dhihin Liyu-Boolis ayaa halkaa nin ku dilay ama dad reer miyi ah sidaa u galay. Waa in qofka dambiga gaystay iyo midkii maxaysataa ku fasaxay dadka la magacaabaa.
Fulinta qorshaha ay odayaashaa dajiyeen waxaa loo xilsaarayaa dad gooni ah oo goordhow u ambabixi doona gobolada dalka iyo magaalooyinka waaweyn si dadweynaha loo gaadhsiiyo.
Cinwaan waxay uga dhigeen qorshaha ay dajiyeen: Ilaahay Mooyee Cidkale Yaan Loo Foorarsan. Wuxuuna ka kooban yahay 10qodob oo siday sheegeen kolba mid un la gaadhsiin doono shacabka.